About Us - Dukaamada eGay
Egay waxaa laga abuuray si fudud oo aan wax uga qabanayno in qof walba uu yahay mid gaar ah, khaas ah, mid ka mid ah nooc. Waxaan ognahay inaan dooneyno in aan caawino dad badan oo hela oo u muujiyo midnimadooda iyo inay adduunka muujiyaan sida gaarka ah ee ay dhab ahaantii yihiin.
Shirkadeena waxay ku taallaa Faransiiska. Waxaan la shaqeynaa alaab-qeybiyeyaasha adduunka oo dhan, bakhaaradena alaabtana waxay badanaa ka yihiin Aasiya. Hadafkayagu waa inaan doorano badeecadaha ugu haboon ee daboola shuruudaha tayada iyo naqshadeynta inta aan ku sii jiri karno. Alaabada la soo xulay waxaa loogu talagalay inay kuu oggolaato inaad muujisid shakhsiyaadkaaga inta aad haysato waqti dheer.
Waxaan dooneynaa inaan kuugu farxno markaad xiiseyneyso, aad jeceshahay, aad safreyso ama markaad shaqeyso. Waxaynu halkan u joognaa inaan kaa caawinno inaad muujisid shakhsiyadiisa sharaftaada! Taasina waa sababta ay ururintayadu uugu soo bandhigeen dharka galbeedka iyo waxyaabo aan caadi ahayn. Alaabtayadu sidoo kale waa kuwo wax ku ool ah oo waxna loo bartaa si ay kuugu soo bandhigaan raaxada ugu badan adigoo isticmaalaya. Annagu waannu nahay! Waxaan jeclaan lahaa in aad la wadaagto riyadaada iyo wax-qabadyadaada annaga.
Dabcan, shirkadeenu waxay noqon laheyd wax, haddii aysan ahayn macaamiisheena cajiibka ah. Tani waa sababta aan marwalba ugu deeqno taageerada macaamiisha ugu fiican ee saaxiibtinimo, haddii aad hayso wax su'aalo ah ama arrimaha ku saabsan amarradaada. Xaqiiqdii, waxaa laga yaabaa inaanan ahayn ganacsi qoys laakiin waxaan hubaa in aan u daneyneyno dhammaan macaamiisheena sidii qoys ahaan, sababtoo ah waxay u qalmaan!
Uruurinteenu waxay halkan u joogaan si ay u muujiyaan sida ay uugu adag tahay iyo gaar ahaantaada.
Sidaa daraadeed waxaad raadisaa dukaankeena oo soo qaado badeeco ama labo aad jeceshahay ...
Waa waqti aad naftaada u daaweyso! Waad ku mahadsan tahay doorashadaada!